Kwinqaku lethu elithi "IziLungiso zeeNkcazo zokuThuthukisa ukunakekelwa kweThumba" siya kukuxelela indlela yokunyamekela isikhumba esikhulayo. Ukukhupha isikhumba ngumqondiso womoya onobuthathaka, iimpembelelo zokusingqongileyo, ukunqongophala kolondolozo lwesikhumba, ukunyuka kweengxaki, izifo ezingapheliyo, ukusela ngokweqile nokutshaya. Ukukhupha isikhumba kubonakaliswe ukunyuka kwentlupheko, ukunciphisa i-turgor, ukungasebenzi kakuhle kwezithukuthuku kunye neengqungquthela ezizimeleyo.
Ngokweminyaka, ulusu luba lumile, ngaphandle kweelungiselelo lezonyiso ezizalisa ukungabikho kwe-sebum, kubalulekile ukuhlawulela ukungabi ncitshiswa emzimbeni nasesikhumbeni. Kunconywa ukuba udle okwaneleyo amanzi, sebenzisa ukhilimu omanzi, oya kunceda ukugcina umswakama okwaneleyo kwesikhumba. Ukukhupha isikhumba kuhlambuluke ngobisi lwezonyango okanye i-emulsions yamanzi, ukhilimu, unokuhlamba ubuso bakho ngesepha enomzi kanye kanye ngeveki.
Kuba le ngozi inobungozi kakhulu ukuhlamba ngamanzi abandayo, amanzi kufuneka akhululeke kwaye abe kwindawo yokushisa. Imizuzu engama-15 ngaphambi kokuhlamba, ulusu kufuneka lufakwe ngefrimu okanye i-oyile yemifino. Kuya kusebenza phambi kokuhlamba ukucoca ulusu ngekhilimu omuncu, i-kefir okanye enye imveliso yobisi. Oku kuya kwenza ulusu lukhuni, kwaye luye luhlambulule luze lubuthinte.
Isiphumo esihle siya kuhlamba kwi-infusion infusion (parsley, coltsfoot, idayil, i-lime-colored). Ukuphuma esitrato, kufuneka usebenzise ukhilimu ophuculisayo ebusweni bakho, kwaye ngokuhlwa ungakulibala ukusebenzisa i-cream edibeneyo kwiinkophe. I-Cream kufuneka ixutywe ngeminwe, kwaye yenze ngokucophelela.
Kuphindwe kabini ngeveki ukwenza iimaski ezinomsoco kunye nokudibanisa kwe-chamomile, ginseng okanye ijusi le-aloe. Kuhle kakhulu ukwenza i-compress epholile kwi-decoction ye-herbal imizuzu eyi-10 okanye emi-15.
I-Herbs (i-linden, i-mint, i-yarrow, i-chamomile njalonjalo), uthele amanzi aphelayo, umele emlilweni omncinci ngemitha emi-5 ukuya kweyimi-10, unxininise imizuzu engama-30 ukuya kwimizuzu engama-40, ucoca nge-double gauge ye-gauze kunye nevenkile kwifriji ngaphandle kweentsuku ezintathu. Ukuxinwa okunjalo kunika ubume besikhumba kunye nombala omhle, uhlaziya kwakhona, unciphise ama-pores awandisiweyo, ukuthintela ukusabalalisa kwesikhumba ekuqaleni, ukulungelelanisa umsebenzi weengqungquthela ezihlambulukileyo.
Isiphumo esihle se tonic sigxininiswe nge-horseradish
U-Natram uhlaziye ngokukhawuleza, engeza iqanda elimhlophe, ukuba unesikhumba sinyama, ukuba unesikhumba esivamile okanye esomileyo, ngoko ke senze i-yolk ne-cream encinci. Ngesikhumba esikhulayo ebusweni, sibamba imaski imizuzu engama-20, kwaye sisuse imaski nge-swab ehambelana namanzi afudumeleyo.
Ukuba ulusu olukhulayo luyakwazi ukukhawuleza, ngoko imaski ephuzi iya kunceda. Sixuba i-yolk enye, isiqingatha se-teaspoon yobusi obumnyama, engeza ama-4 amaconsi yeoyile yemifuno okanye amaconsi ama-10 ejisi lemon, xuba yonke into uze udibanise ngokucacileyo kude kube yilapho i-foam isungulwa.
Ukukhupha isikhumba kuya kunceda ukuvuselela imaski yekhukhamba . Cwenga i juyisi kwikhukhamba, xuba isipuni sesoyi yecucumber, kunye nepunipoon ye-cream ecocekileyo, uze ungeze amaconsi ama-20. Ukubetha umxube kude kube yintlambo, uze usebenzise isiski ebusweni.
Ukuba ii-pores ziyakwandiswa, yenza imaski yesikhumba esikhulayo ukusuka kwiprotheni. Enye iprotheni ehlanjulweyo ihlanganiswe nepaspoon yelisi ye-lemon, ezimbini iibheypuni ze-oat flakes, i-lemon edibeneyo. Zonke zidibene kakuhle.
Sisebenzisa okunye okubandayo kunye nokutshisa ukunyamekela isikhumba esikhulayo
Ukwenza oku, lungiselela ukunyuka kwezityalo zonyango (i-limes, i-sage, i-mint, i-chamomile) kunye nezilwimi ezimbini. Ukuxhamla okuncedo kuncedo ekuncincizeni okutshisa, kwaye ukulungiselela ukunyanzeliswa okubanda kunakho ukucebisa isisombululo setyuwa setyuwa okanye ityuwa elwandle, kwi-1 ilitha yamanzi udinga ipoyileji yetyuwa. Okokuqala, sebenzisa i-compress yokubanda ebusweni bethu, ubambe imizuzwana engama-10, uze udibanise ukushisa kuma-40 degrees, ubambe imizuzu emi-2. Emva koko sebenzisa i-compress ebambekayo emizuzu emi-5, uze uyitshintshe kwi-compress hot, ubambe imizuzu emi-2. Ukukhutshwa kwesikhumba, kufuneka uguqule ukuxinezeleka kathathu kwaye uqedele inkqubo ngenkcenkceshe ebandayo.
Umphumo oqabulekayo wesikhumba esikhulayo uya kuba yiqhwa kwiimithi zonyango, umzekelo, ukusuka kwilinden. Ngesiqingatha ilitha lamanzi abilayo, songeza enye encinane yeentyatyambo ze-lime, sivale into ethile yokufudumala. Emva kwesigamu seyure, ukufakelwa kwamanzi kuya kulungeleka, kuya kuthululwa kwi-mold molds kwaye kufakwe efrijini. Le iqhwa isetyenziswe njengetoniki ngaphambi kokulala okanye siza kufuthela ubuso.
Inkqubo enyanzelekileyo ekunyamekeleni isikhumba esikhulileyo ibusisa ubuso. Ukuzihlaziya kuphelisa ukuvuvukala, kusebenze ukujikeleza kwegazi, kuthintela imbonakalo yobunzima obunzima.
Iimaski kunye neenkqubo zokuzicoca ziyakwenza ngcono ekuseni ukususela ngeeyure eziyi-10-12, emva kwemini ukusuka kwiiyure eziyi-16 ukuya kwe-18, kwaye ngokuhlwa ukusuka kwiiyure eziyi-22 ukuya kwii-23.
Imaski eyenziwe ngobusi, ukhilimu omuncu, i-yolk kunye ne-peel yebhanana. Thatha isipuni se-banana mash exutywe ne-yolk, ujusi kunye ne-ukhilimu omuncu. Hlanganisa umxube malunga nemizuzu engama-15-20 ngobuso ngamnye, yenza ii-2-3 ngeveki, inkqubo yeenkqubo-20.
I-Mask ye-yolk, ubusi, i-persimmons. Sithatha i-persimmon, i-teaspoon yobusi, ngenxa encinci yesitashi, i-yolk, i-teaspoon yeoli yezilwanyana. Siya kuhlambulula isikhumba, sisebenzise imaski kwaye sibambelele imizuzu engama-20, uze uyisitye nge-smear.
I-phytomass ephazamisayo esuka kumacembe e-birch. Gaya kunye nokhula i-birch amaqabunga amnandi, xubana nomlinganiselo ofanayo weoyile yemifuno kunye ne-oatmeal, faka imaski ebusweni bakho imizuzu eyi-15, uhlambe ngamanzi kwiqondo lokushisa.
Umaski wokunciphisa ama-pores. Sidibanisa iqanda elimhlophe, amaconsi ambalwa ejisi lemon, amaconsi ambalwa eoli yeoli, i-teaspoon yobusi. Sula isikhumba, sisebenzise umxube ebusweni bakho imizuzu engama-20, unokusebenzisa iindidi ezininzi zomxube. Emva koko sihlamba ngamanzi afudumele, ngenxa yoko ulusu lufumana umbala omnandi, lutyunyiwe kwaye lunondliwe.
Ukususela kumzi wrinkles - i-oil yesame. Zibhalele imibimbi kwaye ushiye iyure enye, uze umanzi nge-napkin.
Ukuhlaziya isiskiti "Cleopatra" kwi-honey, lemon, ukhilimu omuncu nodongwe. Izabelo ezilinganayo esixuba ubusi, ijusi lemon, ukhilimu omuncu, udongwe. Hlala ebusweni imizuzu eyi-15 ukuya kwe-20, uhlambe ngokufudumala, ngoko ngamanzi abandayo. Le maski igxobhoza imibimbi, i-smoothens, i-white, ivuselele. Kufuneka wenze le maski kabini ngeveki.
Imaski yasekhaya kwioli yeentlanzi kunye nobusi . Thatha amanani alinganayo neoli yeentlanzi kunye nobusi, udibanise kakuhle. Siza kubeka entanyeni size sibhekane nobuncinci obuncinci malunga nemizuzu engama-15 okanye engama-20. Emva kweso sikhwama, amabala kunye nama-wrinkle ayanyamalala.
Umaski wesikhumba esomileyo. Thatha i-yolk kwaye udibanise i-teaspoon enye yeoli ye-hip ye-hip, ungathatha nayiphi na i-oyile yemifino, engeza amaconsi ama-10 wevithamini A kunye no-E, uze ungeze isiqingatha sesipuni se-honey. Sifaka entanyeni kunye nobuso, siyihlambe ngemizuzu eyi-15.
Ukuphakamisa imaski kwimvubelo ye-brewer. Thatha iipilisi ze-brewer ezi-2 okanye ezi-3, zizalise ngobisi ukuhambelana nokucoca ukomuncu omuncu, sebenzisa ubuso bakho malunga nemizuzu eyi-15 okanye engama-20, uze uhlambe iqondo lokushisa lakho. Ukuba isikhumba sinamafutha, sithatha indawo esikhundleni se-peroxide yobisi ye-hydrogen. Le maski kufuneka yenziwe ngesikhumba esikhulayo 2 okanye kathathu ngeveki.
Isiskiti esisishukumisayo se-ukhilimu (ubisi) kunye namazambane abilisiwe. I-mask isilungiselelwe kwiifatata ezibisiweyo, kunye nobisi, isikhumba esinamafutha, kunye nekhumba elomileyo kunye ne-cream. Umxube usetyenziswa ngokufudumele.
Ijusi yentanci ekhutshiwe emva kobuso obuguga. Siza kuhlamba ubuso kunye nekhamera, siyiye ebusweni njengemaski, uze ususe ubuso.
Ngoku siyazi ukuba luhlobo luni lwezonyango eziza kufuneka zisetyenziswe ukunakekela isikhumba esikhulileyo. Emva koko, isikhumba esiphelayo sobuso sidinga ukunakekelwa okhethekileyo. Kwaye uyakwazi ukucotha ukubola kwesikhumba. Siyazi ukuba iziphi izilwanyana zamatriki, iimpawu ezifunekayo ekukhumbeni kwesikhumba.
Indlela yokukrazula amnyama emakhaya
Isitshalo seqanda kwi-caramel
Kuchaneka njani ukutshintshela umntwana?
Ukuvuvukala kwe-mucosa yomlomo yesilonda
Ukubethela - okulungileyo okanye okubi
Ungayikhupha njani i-skin peeling?
I-Biography kaMikhail Afanasyevich uBulgakov